ALAROBIA 22 JANOARY 2020
MATSO LEHIBE TETSY MAHAMASINA : Heni-boninahitra tanteraka ny fetim-pirenena malagasy
Nakotroka ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara. 27 juin 2019
Niavaka ny matso lehibe tetsy Mahamasina izay noentina nanamarihana izany. Heni-boninahitra tanteraka i Madagasikara teo anatrehan’ireo vahiny nasaina.
Tao anatin’ny firavoravoana sy filaminana tanteraka no niatrehan’ny vahoaka Malagasy ny fetim-pirenena nanomboka ny alin’ny 25 jona hatramin’ny omaly 26 jona tontolo andro.
Niova endrika tsy toy ny fankalazana nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay no noentina nanamarihana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara tamin’ity taona ity. Samy resy lahatra ny rehetra fa tena niavaka tokoa ny hetsika rehetra. Sambany teo amin’ny tantara no nisy Tafika avy amina firenena vahiny nandray anjara tamin’ny matso lehibe izay notanterahina tetsy Mahamasina, ny tolakandron’ny 26 jona. Namaly ny fanasan’ny Filoham-pirenena tamin’izany i Kaomôro, La Réunion ary i Rwanda. Tsara lamina ihany koa ny matso nataon’ireo Foloalindahy Malagasy nandraisan’ny Tafika, ny zandary ary mpianatra ho zandary sy avy eo anivon’ny Polisim-pirenena anjara. Ireto farany no tompon’ny fanasana, mifanindra an-dalana amin’ny fetin’izy ireo ihany koa ny fankalazana ny fetim-pirenena. Manodidina ny ora telo teo ho eo ny faharetan’ny matso. Heni-boninahitra tanteraka ny fetim-pirenena malagasy teo anatrehan’ireo vahiny nasaina. Tsy mitsanga-menatra i Madagasikara manoloana ny firindran’ny fandaminana rehetra tamin’ny matso lehibe tetsy Mahamasina. Naseho nandritra izany ireo fitaovana arifomba vaovao sy manara-penitra an’ny Foloalidahy malagasy izay ananan’i Madagasikara ny hambompom-pireneny manokana. Isan’izany ireo fiara tsy mataho-dalana efa ho am-polony maro ho an’ny Tafika, Zandary sy ny Polisy, teo ihany koa ireo angidimby izay naseho ny vahoaka Malagasy iray manontolo tetsy Mahamasina. Fitaovana ezaky ny fitondram-panjakana manokana hoentina hiadiana amin’ny asan-dahalo, hanafoanana ny asan-jiolahy ary mba hampandry fahalemana ny firenena iray manontolo. Tsy mbola fahita ihany koa, ary isany tena nampiavaka ny matso tetsy Mahamasina ny fisiana sarin’ady maneho ny fandrobana ataona andian-dahalo any amin’ireo tany lavitra sy ny fidirana an-tsehatra haingana ataon’ireo tandroka aron’ny vozona. Amin’ny ankapobeny, nifety tao anatin’ny fifaliana ny vahoaka Malagasy.
Nahatsiaro ho afa-po ny rehetra tamin’ny fanapoahana afomanga tetsy amin’ny farihin’Anosy, ny harivan’ny 25 jona nanomboka tamin’ny 7 ora hariva. Ankilany, nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa ireo mpitandro filaminana tamin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ka isany tena nahatontosa ny fety lavitry ny korontana.
Namaly ny fanasana ny Filoha Roandey
Nanasa vahiny manan-kaja tamin’ny fanamarihana ny fetim-pirenena koa ny Filoha Rajoelina. Tamin’ity taona ity dia nosafidian’ny Filoha Andry Rajoelina ny Filoha Rwandais, Paul Kagamaé. Omaly antoandro nanodidina ny tamin’ny 11 ora no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina manokana nitondra ny Filoha Rwandais mivady. Tonga nitsena azy ireo teny an-toerana ihany koa ny Filoha Rajoelina sy ramatoa vadiny. Taorian’izay fanomezam-boninahitra ara-tafika nomena ity vahiny manokana dia nisy ny fandraisana azy ireo tao amin’ity trano fandraisam-bahiny eny Ivato. Raha tsiahivina dia isan’ireo firenena taraiky tamin’ny fandrosoana taty amin’ny kaontinanta Afrikanina i Rwanda. Firenena potiky ny ady an-trano ary vahoaka an-hetsiny mihitsy no namoy ny ainy vokatr’izany.
Noho ny fahasahiana lehibe nananan’ny Filoha Kagamé anefa dia lasa isan’ireo firenena mandroso indrindra ary fitaratra aty Afrika i Rwanda ankehitriny. Tsara alain-tahaka ho an’i Madagasikara i Rwanda. Isany antony izany nanasan’ny Filoha Malagasy ny Filohany mba hahafahana mifampizara traikefa eo amin’izay lafiny fampandrosoana izay. Ity farany dia tsy nisalasala fa nanokatra varavarana ihany koa ary porofo mivaingana sy mariky ny fahavononany hanampy an’i Madagasikara izay fahatongavany nanome voninahitra ny fetim-pirenena malagasy omaly izao. Omaly, mialoha ny nanombohan’ny matso dia naverin’ny Filoha Andry Rajoelina indray ny toky nampanantenainy ny vahoaka Malagasy hatramin’izay dia ny hoe, “Tsy maintsy tafita i Madagasikara”.
Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (215) 20 janvier 2020 Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (194) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (133) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (125) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (116) 20 janvier 2020 Mpampianatra 500 mahery nahazo fifanarahana arak’asa FANABEAZAM-PIRENENA (96) 20 janvier 2020